Asekhulile amadodakazi akwa-Obama – Daily Worthing
Asekhulile amadodakazi akwa-Obama
Emva kokuthi uMnz Barack Obama akhethwe ngo ‘elethu’ ekubeni ngumongameli waseMelika ngo-2008, sathola ithuba lokwazi umndeni wakhe okungunkosikazi wakhe esimthanda kakhulu uMichelle Obama namadodakazi abo amabili uMalia no-Sasha. Ngaleyo nkathi, uMalia wayeneminyaka eyishumi nje kuphela, udadewabo uSasha yena eneminyaka eyisikhombisa nje kuphela kodwa manje sebengosisi abadala abaseNyuvesi.
Ngo-2017 u-Barack Obama wakhetha ukuzibeka phansi izintambo emva kokuhola iMelika iminyaka eyisishagalombili, wamemezela ukuthi uyashiya kwezepolitiki kodwa usaqhubeka nokusebenzela isizwe. U-Obama uneziqu zobummeli, wayengumongameli wesi-44 eMelika kodwa nguye owokuqala omnyama. Kule minyaka ayisebenzile, u-Barack ube ngumongameli waseMelika othandiwe umhlaba wonke nohlonishwa kakhulu ngenxa yegalelo lakhe emhlabeni wonke jikelele.
Umkakhe uMichelle Obama, wafika wathinta izinhliziyo zabaningi futhi wakhombisa ukuba ngumama esizweni sonkana. Naye uneziqu zobummeli, ube ngumama wesizwe wokuqala omnyama eMelika. Emva kokwehla esikhundleni, ukhiphe incwadi ebizwa nge-Becoming Michelle Obama eyenaba kabanzi ngempilo yakhe, le ncwadi ithengwe umhlaba wonke okukhomba ngokusobala ukuthi uguqule izimpilo zabaningi umhlaba wonkana. Yize engaseyena umama wesizwe kodwa naye usaqhubeka nokusebenzela umphakathi nokuthinta izinhliziyo zabantu umhlaba wonke.
Yize kungekho okutheni esikwaziyo ngamadodakazi akwa-Obama njengoba impilo yabo ibifihliwe. Mhla uyise egcotshwa wafunga ukuthi ufisa aphile impilo efana neyabanye abantwana futhi baye esikoleni njengezinye izingane baqede bathole imisebenzi. Amadodakazi akwa-Obama namanje asahamba emazwini kayise, njengoba uSasha ezoqala e-University of Michigan, uMalia use-Harvard University.
Kuza i-Black Friday nje, inqwaba ivele icwila ezikweletini – kuphawula ungoti
AC Schnitzer shoves 294 kW in new Toyota GR Supra